Ny vokatry ny fijerena mihoatra ny fanamafisana - SEO torohevitra avy amin'ny Expert Expert, Natalia Khachaturyan
Rehefa manohy manatsara ny votoatin'ny tranonkala ny Internet, dia mety hikorontana ny olana momba ny fanatsarana ny endriny. Tao anatin'izay taona faramparany, ireo loharanom-baovao miafina miafina sy ny fitenenana amin'ny teny fototra dia afaka mamorona marketing (digitale) dizitaly amin'ny sehatra tsy ara-boajanahary. Amin'ny toe-javatra hafa, miankina amin'ireo famantarana sy fifamoivoizana ivelany ny sasany amin'ireo webmasters mba handefa ny saka rohy mankany amin'ny sehatr'izy ireo. Ny fizotry ny SEO dia miankina amin'ny pejy maromaro ao anaty pejy sy ivelan'ny pejy, izay mikendry ny hampitombo ny fahitana ny tranokalan'ny mpihaino.
Ny tetikady tetikady Semalt , Natalia Khachaturyan, dia manazava fa maro amin'ny "marketing" an-tserasera amin'ny aterineto no mety hampisy risika amin'ny fanatsarana ny tranokala - نقل العفش من مكة للرياض. Ankoatra izany, Google dia manatanteraka ny famoretana ny "artificial" na "tsy manara-drenirano" ny tanjon'izany dia ny hampitombo ny fahefam-pitantanana amin'ny sehatra iray manokana. Ny ankamaroan'ny SEO maso dia mieritreritra momba ny tantara mifandraika amin'ny sehatra iray izay hodiany ao anatin'ny drafitra nomerika nomerika. Mba hisorohana ny tranga famerenana amin'ny rohy, azonao atao ny mianatra momba ny karazana rohy, ireo olo-marina mba handefa saka fifandraisana ary koa ny tantaran'ny rohy sy ny mombamomba ny sehatra.
Famantarana ny fampifanarahana ny fanamafisana
Ny Google dia miankina amin'ny algorithm hahafantarana lamina tsy mahazatra mikasika ny fitohanan'ny fifamoivoizana..Noho izany dia mora ny mamantatra ny fironana "tsy ara-boajanahary" momba ny fampisehoana rohy manokana ao anaty aterineto. Ohatra, ny tranonkala maro amin'izao fotoana izao dia manana bilaogy. Ny endriky ny rohy resahina sy ny endriky ny lahatsoratra amin'ny endriny dia miseho amin'ny fepetra marim-pototra manaraka ny lamina azo tsapain-tanana. Ny fampisehoana mahery vaika toy ny fitaterana fitaterana ambony dia afaka mampitombo ny ahiahin'ny tranonkala miaraka amin'ny fampifandraisana ny fanatsarana. Ao anatin'ny famoretana vao haingana, Google dia mety hamoy haingana ny fahatokisana amin'ny rohy sasany manondro ireo tranonkala. Amin'ity tranga ity, tsy azo atao ny manamarina fa tsy azo atao ny manangona hetsi-panoherana tsy mahasoa ny ezaka fametrahana anao.
Ohatra, ny tranonkala iray dia afaka manomboka ny fifamoivoizana mivantana avy amin'ny tranonkala 20 samihafa ao anatin'ny lasitra nomena. Avy amin'ny fandinihana akaiky dia mifandray amin'ny tranonkala ireo tranonkala ireo. Ireo tranga ireo dia afaka manolotra sehatra ho an'ny fifandraisana tsy voajanahary avy amin'ny antontan-taratasy sy ny fironana ara-tantara. Ny 90% ny resadresaka dia afaka manolotra tranga iray izay ahafahana manangana tranonkala ho toy ny spammy. Tamin'ny lasa, ireo sampan-draharahan'ny SEO mainty hoditra dia manokatra sehatra samihafa mba hampifandraisany ny profilan'ireo mpampiasa azy na tranonkala mpanjifa.
Rehefa manatsara ny votoatin'ny vohikala, dia zava-dehibe ny manaraka fomba voajanahary mametraka lahatsoratra endritsoratra. Ny fandefasana loatra ny permalinks amin'ny lahatsoratra dia mety hampitombo ny ahiahiny amin'ny hoe mizara tsy ara-dalàna ny fampahalalana izay miankina amin'ny fametrahana ny famaritana Google. Ny rohy hafahafa izay toa mifamatotra amin'ny tsirairay dia afaka manampy na manimba ny fivoaran'ny SEO amin'ny tranonkala iray.
Ny tranonkala izay tsy mifanaraka amin'ny mari-pamantarana ara-dalàna dia mamaritra ny mety ho sazy mihatra. Amin'ny toe-javatra hafa, ny tranonkala dia mety hijaly noho ny tsy firaharahiana, indrindra rehefa milefitra amin'ny tetikady mainty SEO. Ireo mpamorona vohikala Google dia mieritreritra momba ireo rohy momba ny rohy izay ampifandraisin'ny olona amin'ny tranonkala. Amin'ny toe-javatra hafa, ny lahatsoratra momba ny fanjaitra dia mety ho antony iray mahatonga ny fanaovana varotra dizitaly tsy mahomby. Ity torolàlana SEO ity dia afaka manampy anao hahita ny tranga mety hitranga amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny tranokalanao.